Sida loo tirtiro codsiyada ku jira Apple Watch | Wararka IPhone
Wax aad ugu badan qalab kasta ayaa ah barnaamijyada tijaabada ah iyo, waxa casharka xiga uu ku saabsan yahay, ka saar. Marka laga hadlayo Apple Watch, way ku sii badnaan doontaa haddii ay suurtagal tahay in la tirtiro codsiyada qaarkood oo, marka wakhtigu yimaado, aan u malayno in uma qalanto inaad gacanta ku qabato. Sababta kale ee loo doonayo in laga saaro barnaamijyadu waxay noqon kartaa booska laga heli karo qalabka. Sida shiidaa dhammaan saamiyada Apple Watch, Nidaamku wuxuu kudhowaad yahay midda aan horeyba ugu isticmaalnay iPhone-ka, laakiin sidoo kale waxaan leenahay wado aan kaga saareyno codsiyada moobilkeena casriga tufaaxa qaniinay.
1 Sida loo tirtiro barnaamijyada ku jira Apple Watch
2 Sida looga saaro barnaamijyada Apple Watch iPhone
Waxaan ku laabaneynaa shaashadda guriga (Carousel) ee Apple Watch.
Waan riixnaa oo qabannaa astaan ​​kasta oo lagu galo habka wax ka beddelka.
Markay astaamuhu bilaabaan inay ruxaan, waxaan ku ciyaareynaa X ee arjiga ee aan rabno inaan ka saarno.
Daaqadda digniinta ah, ayaanu taabannaa Ka saar Abka.
(Fiiri sawirka sare)
Sidaan soo sheegnay, adoo haysta barnaamijka Apple Watch ee taleefankayaga iPhone-ka ah, waxaan sidoo kale ka tirtiri karnaa codsiyada taleefanka. Shakhsi ahaan, waa wax aan u arko inaan loo baahnayn haddii ikhtiyaarigu toos uga socdo saacadda, laakiin waxaan kuu sharxi doonaa sida looga sameeyo iPhone-ka.
Sida looga saaro barnaamijyada Apple Watch iPhone
Waxaan fureynaa arjiga Apple Watch on our iPhone.
Waan ciyaarnay Saacaddayda xagga hoose.
Hoos ayaan u siibaneynaa oo waxaan taabanaa magaca arjiga aan rabno inaan tirtirno ee Apple Watch.
Waan fureynaa doorashada Ku muuji abka Apple Watch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Sida loo tirtiro barnaamijyada ku jira Apple Watch